Kupaka Simudza Vagadziri & Vatengesi | China Kupaka Simudza Fekitori
Kusimudza yekupaka uye Yekupaka YeMotokari systemchigadzirwa chakakosha muhupenyu hwedu hwezuva nezuva chinokonzera nzvimbo yekupaka mota kuve shoma uye zvishoma. Matatu-epamhepo yekupaka michina inogona kuganhurwa kuita yega-inotenderera matatu ekupaka zvishandiso, semi-otomatiki matatu-epamhepo yekupaka michina uye yakazara otomatiki matatu-epamhepo yekupaka michina, pamwe neyemhuri-shandisa mini matatu-epamhepo yekupaka michina, uye zvakazara otomatiki mativi-matatu ekupaka michina inogona zvakare kuganhurwa kuita maviri-masheji kana akawanda-masheya mhando mhando Zvizere otomatiki matatu-eenzvimbo ekupaka michina, yakatarisana yakasimba otomatiki matatu-epamhepo yekupaka michina uye yakasarudzika-chimiro chimiro otomatiki matatu-eenzvimbo ekupaka michina.
China Daxlifter Rotary papuratifomu mota inosimudza yakasarudzika dhizaini yemotokari show, saizi uye kugona kunogona kuve tsika inoitwa nezvaunoda. Iyo mota inotenderera chikuva inoshandisa yepamusoro-soro inounzwa giya mota kuona kuti chikuva chinogona kumhanya mushe uye kutenderera neunifomu kumhanya kana chiri kushanda.
China China Post Post Yakagadzirwa Mota yekupaka Lift ndeyediki diki yekupaka sisitimu iyo inozivikanwa muEuropean nyika uye 4s shopu. Kupaka yekumisikidza ndeye chigadzirwa chakagadzirwa chinoteedzera yedu mutengi chinodiwa, saka hapana yakajairwa modhi yekusarudza. , ngatirege tizive iyo chaiyo data yaunoda
Tiltable Post Kupaka Simudza tora hydraulic nzira dzekutyaira, hydraulic pombi kuburitsa yakanyanya kumanikidza oiri kusunda iyo hydraulic humburumbira kutyaira mota kupaka bhodhi kumusoro uye pasi, kuzadzisa chinangwa chekupaka.Kana iyo mota yekupaka bhodhi kunzvimbo yekupaka pasi, mota Inogona kupinda kana kubuda.
4 Post Lift Parking ndeimwe yeanonyanya kufarirwa kusimudza mota pakati pevatengi vedu. Izvo ndezve valet yekumisikidza michina, iyo yakagadzirirwa nemagetsi control system. Inotyairwa ne hydraulic pombi chiteshi. Mhando yakadaro yekupaka kusimudza yakakodzera kune ese akareruka mota uye inorema mota.
wo Post Mota Simudza tora hydraulic nzira dzekutyaira, hydraulic pombi kuburitsa yakanyanya kumanikidza mafuta kusunda iyo hydraulic cylinder kutyaira mota kurongedza board kumusoro uye pasi, kuzadzisa chinangwa chekupaka.Kana iyo mota yekupaka bhodhi kune yekupaka nzvimbo pasi, mota Inogona kupinda kana kubuda
Kune zvakawanda zvakanaka zve kusimudzira mota kupaka : 1.High-chiyero chehunyanzvi uye zvehupfumi zviratidzi Matatu-epamhepo kupaka michina ine hombe yekupaka kugona. Tsoka diki, zvakare inowanikwa Matatu-eenzvimbo ekupaka zvigadzirwa Matatu-eenzvimbo ekupaka michina (8 mafoto) Paka mhando dzese dzemotokari, kunyanya mota. Nekudaro, iyo mari yekudyara yakaderera pane yepasi pevhu yekupaka garaji yeiyo yakafanana chinzvimbo, iyo nguva yekuvaka ipfupi, simba rekushandisa riri shoma, uye nzvimbo yepasi iri diki kwazvo kupfuura iyo yegasi repasi pevhu. 2.Ichitarisiko chakabatana pamwe nechivakwa, uye manejimendi iri nyore. Iwo matatu-mativi ekumisikidza michina anonyanya kukodzera kuzvitoro, mahotera, zvivakwa zvehofisi, nenzvimbo dzevashanyi. Midziyo mizhinji haidi vashandisi vane hunyanzvi, uye inogona kupedzwa nemutyairi wega. 3.Complete inotsigira zvivakwa uye "girini" zvakatipoteredza zvine hushamwari otomatiki-e-matatu magaraji ane yakakwana kuchengetedzeka sisitimu, senge chipingamupinyi chisimbiso mudziyo, chimbichimbi braking mudziyo, kamwe kamwe kudzivira chidziviriro mudziyo, zadzisa dziviriro mudziyo, leakage dziviriro mudziyo, nakisa refu uye nakisa kumusoro mota Yekuona mudziyo uye zvichingodaro. Maitiro ekupinda anogona kupedzwa nemawoko, kana anogona kupedzwa otomatiki nemidziyo yemakomputa, iyo inosiyawo nzvimbo yakawanda yekuvandudza mune ramangwana uye dhizaini. Sezvo mota ichingomhanya nespidhi kumhanya kwenguva pfupi kwazvo panguva yekuita, ruzha uye kupera zvakanyanyisa.